ဖြည်းဖြည်းဆေးဆေးလုပ်ကြမယ် - Hello Sayarwon
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ် » ကလေးငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn | ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint
Update Date စက်တင်ဘာ 3, 2021 .2mins read
မြန်မြန်ပြီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာ ကိုယ်လက်နှီးနှောခြင်းလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးထားပါတယ်။
ဘာလုပ်လုပ်မြန်မြန်ပြီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့အရာတွေကအဆင်ပြေဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ မိန်းကလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေးကိုယ်လက်နှီးနှောတဲ့ကိစ္စဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ။စိတ်တအားတက်ကြွလာလို့ ဆက်ဆံလိုက်ပေမဲ့ မိနစ်ပိုင်းနဲ့တင် ဆန္ဒပြီးမြောက်သွားရင် လိင်ဆန္ဒကိုအပြည့်အဝမခံစားလိုက်ရဘဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒီလိုအခြေအနေကို ကိုယ့်ဖာသာကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြရင် စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကုသနိုင်တဲ့နည်းဆိုလို့ ခက်ခက်ခဲခဲတွေမထင်လိုက်ပါနဲ့။ သိပ်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ Edging လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနည်းလမ်းက တကယ်တော့ ဆန္ဒပြီးမြောက်ခါနီးမှာ လိင်ဆက်ဆံတာ (ဒါမှမဟုတ်) အာသာဖြေတာကို ရပ်ပစ်ပြီးမပြီးသွားအောင် ထိန်းချုပ်လိုက်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ဖာသာအာသာဖြေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး ဒီနည်းကိုယောင်္ကျားလေးတွေတင်မဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးတွေလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခါနီးမှာ ဆက်ဆံမှု (ဒါမှမဟုတ်) အာသာဖြေတာကိုရပ်လိုက်ပြီး မိနစ်ပိုင်းလောက်စောင့်လိုက်ပါ။ ဆန္ဒမပြီးမြောက်တော့ဘဲရပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေဆို သုက်လွှတ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့မှနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ဆက်ဆံပါ/အာသာဖြေတာကိုပြန်လုပ်ပါ။
ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ပဲလုပ်ပါ။ ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးဖြစ်ရင် ပြန်ရပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ပြန်လုပ်ပါ။ ဒီလိုထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ရင် လိင်ဆက်ဆံမှုကို အချိန်ကြာအောင် တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီနည်းကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိင်ဆက်ဆံမဲ့သူမလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်း အာသာဖြေပြီးလည်းလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရလည်း Edging လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနည်းလမ်းကိုသုက်လွှတ် စောတဲ့ယောင်္ကျားလေးတွေမှန်မှန်လိုက်နာကျင့်သုံးရင် သုက်ထိန်းနိုင်အား ပိုကောင်းလာပြီးအချိန်ပိုကြာကြာ ဆက်ဆံနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်း သုက်လွှတ်မြန်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေ သုက်ထိန်းနိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အဖော်နဲ့ အချိန်ပိုကြာကြာဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်လိင်ဆက်ဆံပြီး ဆန္ဒပြီးမြောက်သွားတဲ့သူတွေပဲ လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာ ထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ စအိုကနေဆက်ဆံတာ၊ ပါးစပ်နဲ့ဆက်ဆံတာတွေပါပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့အရမ်းမြန်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး၊ မိန်းကလေးတချို့မှာဆို လိင်ဆက်ဆံတဲ့အဆင့်ထိတောင်မရောက်ဘဲ နည်းနည်းလေးလှုံ့ဆော်မှုရတာနဲ့တင် ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတဲ့အထိမြန်ဆန်တတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဘာလို့ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့ကို အချိန်ဆွဲရမှာလဲ၊ မြန်မြန်ပြီးတော့ပိုမကောင်းဘူးလား
ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေကတော့ကိုယ့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တချို့ကတည်းမြန်မြန်ပြီးတာကြိုက်သလို ကြာမှ ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တာပါပဲ။ ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမလိင်ဆက်ဆံတယ်လို့ကြားတိုင်း ရွံစရာကိစ္စတစ်ခုလို့မထင်စေချင်ပါဘူး။ ဒါသဘာဝပါပဲ။တကယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ (၂) ယောက်သားကိုယ်လက် နှီးနှောမှုမှာ လိင်စိတ်တစ်ခုတည်းပါဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ခင်မှု၊ လေးစားမှု၊ နားလည်မှုတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုမိန်းကလေးတွေကယောင်္ကျားလေးတွေထက် လိင်ဆန္ဒ အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ပိုကြာတယ်၊ ပြီးမြောက်ဖို့ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးကတော့သဘာဝအရပိုမြန်မြန် ပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ (၂) ယောက်အတူဆန္ဒပြီးမြောက်အောင် အတူတူညှိနှိုင်းပြီး နေနိုင်မယ်ဆို (၂) ယောက်လုံးအတွက် စိတ်သုခဖြစ်စေမှာပါ။
ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့အချိန်ကြာအောင်လုပ်နိုင်လေ လိင်မှုသုခကိုပိုကောင်းကောင်းခံစားရနိုင်လေပါပဲ။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ကဘရာဇီးနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနတစ်ခုအရဆို အချိန်ယူပြီးနားလိုက်အာသာဖြေလိုက်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာပိုပြီးဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့လွယ်ကူတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မရှိသလောက်နည်းပါတယ်။ သေချာစနစ်တကျလုပ်ဖို့နဲ့ တော်ရုံသင့်ရုံတော့လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆရာကြီး ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ပါလို့လည်း အကြံမပေးပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ ဥပမာပြောရရင် အလွန်အကျွံအာသာဖြေတဲ့ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ဝှေးစေ့ထဲသွေးစုတဲ့ ပြဿနာကြုံရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ဆန္ဒပြီးမြောက်ဖို့ကိုပဲ အရမ်းအာရုံစိုက်ပြီးမလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ စိတ်လက်ပေါ့ပါးနေမှလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့တာမဟုတ်လား။ ငါပြီးကိုပြီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးအရမ်းတင်းခံနေရင် ဘာကိုမှမခံစားလိုက်ရဘဲ ပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တင်မှာပါ။
ကိုယ့်ဖာသာတစ်ယောက်တည်းအာသာဖြေတာဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံတာဖြစ်ဖြစ်အခုပြောတဲ့ နည်းကိုလုပ်ကြည့် ဖို့သင့်လျော်ပါတယ်။ စိတ်လည်းချရသလို ဘေးလည်းကင်းပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတုန်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆို ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အဖော်ကိုကြိုတင်ပြောထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက (၂) ဦး (၂) ဖက်သဘောတူမှအဆင်ပြေနိုင် တာမို့ပါ။ အားလုံးပဲစိတ်လက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ သာယာတဲ့လိင်မှုဘဝကို ဆောင်ရွက်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင် နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်မှာ ငိုကြွေးတာ ဘာကြောင့်လဲ
အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ခန္ဓာကိုယ် ရောဂါကူးစက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရာသီသွေးဆင်း Sex toy ချောင်းဆိုးခြင်း လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါ လိင်ဆက်ဆံမှု
ကူးစက်ရောဂါများ, တခြား ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါများ ဇွန် 8, 2020 .2mins read
လိင်အင်္ဂါ၊ အမျိုးသား၊ Viagra၊ ခန္တာကိုယ် အလေးချိန်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လိင်ဆက်ဆံမှု၊ Testosterone၊ ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုး
အမျိုးသားကျန်းမာရေး, ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်း မေ 26, 2020 .2mins read
ကျန်းမာရေး ချစ်တင်းနှောခြင်း လိင်စိတ်ဆန္ဒတွေ Relationship ကိုယ်ဝန် လိင်ဆက်ဆံခြင်း စိတ်ဖိစီးမှု အာသာဖြေတာစိတ်ကူးယဉ်အတွေးတွေ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော လိင်မှုဘဝလမ်းညွှန်, လိင်မှုဘဝသာယာပျော်ရွှင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ ဧပြီ 29, 2020 .2mins read
Condom ကို ဘယ်လို စနစ်တကျ သုံးမလဲ
Condom ဘယ်လို စနစ်တကျ သုံးမလဲ လိင်ဆက်ဆံ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ သားဆက်ခြား သုက်ရည် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ ကျန်းမာရေး သားဆက်ခြား
ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော လိင်မှုဘဝလမ်းညွှန်, သားဆက်ခြားခြင်း ဧပြီ 25, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 25, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 25, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 27, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 10, 2020 .2mins read